नजिक न्युज | मिडियाहरुले कतै आफ्नो काम कर्तव्य र अधिकार त भूलेका छैनन् ?
देशको चौथो अंगको रुपमा रहेको मिडियाहरुले कतै आफ्नो काम कर्तव्य र अधिकार त भूलेका छैनन् भन्ने प्रश्नहरु लाखौं निमूखा नेपाली दाजुभाई दिदीबहिनीहरु उठरिहेको छ । विश्व २१ औँ सताब्दीमा गुज्रिरहेको वर्तमान अवस्थामा पनि आफूले गर्न हुने र गर्न नहुने कामको मेसो नपाउँदा जो कोहिपनि धरापमा पर्ने कुारा स्वभाविकै हो ।
हाम्रो मुलुकमा बिभिन्न किसिमका घटनाहरू घट्नु कुनै नौलो कुरा होइन । म को हुँ ? म के गर्दै छु ? म के काममा तल्लिन छु ? मेरो काम के हो ? कतै मैले गरेको कामले अरुकसैको जीवन बर्बाद त हुदैन ? के म अरु कसैको जीवनमा आइपरेका समस्या समाधान गर्न सक्छु ? जस्ता प्रश्नहरु उब्जाएर मात्र कामको थालनि गर्दा राम्रो हुन्छ ।
हामिले आफ्नो संस्कार र संस्कृति पनि भूल्लुहुदैन् प्रत्येक मिडिया कर्मीहरुमा मेरो उत्तिकै सहयोग र सद्भाव रहिरहनेछ । आजको अवस्थामा आएर केहि मिडियाकर्मी सार्थीहरुले सुर्खेत जिल्लाको आमा छोराको घटनालाई वैचारिक स्थान दिएको पाउँदा मलाई अलिकती नराम्रो लागेको मात्र हो ।
किन भने केहि कुरा गर्नै नहुने खालका हुन्छन भने केहि कुरा नगरिनहुने हुन्छन् । जसका संगठित रूपमा सुर्खेत घटनालाई पहाडै बनाउनु पर्छ जस्तो मलाई लागेन । यो काम नेपालको कानुनले आफै फैसला गर्थ्यो होला । एउटा निमुखा जनताको नरहेको इज्जतलाई अझै बगाइदिदा हामि कति खुसी छौ होला त ? दिन प्रतिदिन यो देशमा दलित महिला , जनजाति , अपाङ्ग आदि पछाडि पारिएका समुदाय माथि दिनदिनै अन्याय अत्याचार हुदापनि यसका निम्ति किन मिडियाहरु चुपचाप बस्छन् ।
पधेरा छोएको निहुँमा दलित माथि दुर्व्यवहार हुदाँ सुर्खेत घटनामा जाने मिडियाहरु कहाँ लुकिरहेका हुन्छन् । ११ महिने बालिका बलात्कृत हुदाँ कता हराउछन् ति मिडिया , सुदूरपश्चिम , मध्यपश्चिम तथा देशका बिभिन्न स्थानमा बाढीपहिरोले क्षति पुर्याउदा कुन संसारमा मस्ति गरेका हुन्छन् मिडियाहरुले । यो त केहि उदाहरण मात्र हो । दुई नम्बर प्रदेशमा हालसालै कति दलितको निर्ममतापूर्वक हत्या भएको छ । किन चुपचाप
मिडियाहरु यूट्युबमा राखेर पैसा कमाउने मात्र हो कि राष्ट्र प्रतिसदभाव जगाउने हो ।
जानिजानी हुने र ऐन कानुन मा स्वतह प्रतिबन्धित कुरालाई त्यति महत्व नदिने ! कहिले काँही हुनेगरेका घटनाहरुलाई सरकारबाट नै केहि मात्रामा घटना भएपनि समाधानका उपायहरु ऐन र कानुनमा यथेष्ठ व्यवस्था गरेको हुदाँ हुदैँ पनि ठूलै पहाड बनाउन राम्रो होइन ।
सयको मतलब मैले कार्वाही गर्नै हुन्न भनेको होइन । जस्तो हाड करणी मा १८ हप्तासम्म को गर्भ स्वतह गर्भपतन गर्न पाउने व्यवस्था नेपालको ऐन कानुनमा नै उल्लेख भइसकेको हजुरहरुलसई थाहाँ नै होला तर दलित भएकै कारण मठमन्दिरमा जान नपउनु, पानि पधेरामा जान नपाउनु यो व्यवस्था त सरकारले स्वतहः दण्डित गरेको छ ।
यीकुरालाई अपनाएर पत्रकारिता गर्दा राम्रो हुन्छकि ? अर्को कुरा के छ भने हिजोआज सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा गुरुकुल शिक्षामा दलितलाई अध्ययन गर्न नपाइने भनि जुलुस गरिरहेका अधिनायक बादी पाखण्डी सोच बिचार भएको समाजमा अधिकार लिन गएका दलितमाथि भएको अत्याचार र दुर्व्यवहार विरुद्ध किन मिडियाहरु मौन छ ।
यस्ता कुरालाई किन बढी भन्दा बढी प्राथमिकतामा राखिदैनन् । सरकारले निमुखा जनताहरुलाई मात्र कानुन बनाए झै मिडियाहरुले नि देख्ने आँखा निमुखाहरुलाई मात्र देख्ने हो त ?
मुलुकको कानुन भन्दा माथि जो कोही पनि हुनसक्दैन । देशले आफ्नो नागरिकका लागि बिभिन्न अधिकारहरू प्रत्यायोजन गरेको हुन्छ । मिडियाले सत्य तथ्य घटना बाहिर ल्याउने हो तर घटनाको छानबिन गर्ने अधिकार मिडियाहरुलाई छैन । पहुँच नहुने माथि यत्रो अन्याय गर्नु आफ्नै लागि नराम्रो हो ।
यस घटनालाई चुलि बनाउने क्यामराहरु रुकुमको घटनामा किन गएनन् होला ? कि यि क्यामराले ठूलाबडालाई नदेखिने गरि बनाएका छन र ? त्यसैले पत्रकारिता सत्य , तथ्य र निष्पक्षमा आधारित हुन जरुरी छ ।
अझ अर्को कुरा त यसै घटनालाई लिएर केहि नेपाली महिलाहरुले त्यस घटनाकी मुख्य पात्रलाई जिउदै जलाउनुपर्छ भन्नु स्वभाविकै हो तर उहाँहरुले यो पनि बुझ्न जरुरी छ किआफूले चाहेको मान्छेसंग प्रेम गर्नु अपराध होइन ?
यहाँ जातकै आधारमा प्रेम–पे्रमी जिउँदै जलिरहनु परेको छ । मैले भन्न खोजेको कुरा हो कसै घटानामा बोल्ने महिलाले रुकुमको घटनामा बोल्दिदा झनै राम्रो हुन्थ्यो । किनकि पीडितले न्याय पनि पाउने आफ्नो अधिकारका लागि पनि लडिने । त्यसैले बोल्दा सबै ठाउँमा बोलौ न्यायको पक्षमा बोलौ ।
लेखक: भानु नगरपालिका ३ तुरतुरे तनहुँमा रहेकाे जन जागृति माध्यमिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक हुन ।
शुक्रबार १९, भदौ २०७७ ०३:३७ मा प्रकाशित
बिहीबारबाट बढ्यो आन्तरिक हवाई उडानको कोटा